Facebook ကို Gtalk လို သုံးရအောင် | Easy Music Radio
Facebook ကို Gtalk လို သုံးရအောင်
chityin htoo | 20:13 | ဆော့ဝဲလ်များ
Facebook ဟာ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးလိုပဲ
User တွေကို စွဲလမ်းတွယ်ငင်စေနိုင်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာလေးပေါ်မှာ
တခြားလုပ်စရာတွေ လေ့လာစရာတွေ ရှိနေတာတောင်မှ
Facebook လေးကိုဖွင့်ပြီး ဟိုဖတ်ဒီဖတ် ..
ကွန်ပြူတာပေါ်မှာလုပ်ရင်း Facebook ကိုလည်း ဘာ Browser မှ
မဖွင့်ပဲ .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chat ချင်ချက်လို့ရသလို
New Feed တွေကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သိရှိဖတ်မှတ်နိုင်မယ့်
Gtalk ကိုတော့ အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ ..
Browser ဖွင့်ပြီး Gmail အကောင့်ကို Sign in ၀င်နေစရာမလိုပဲ
Gtalk လေးဖွင့်ထားရုံနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chat လို့ရတဲ့တဲ့အပြင်
mail ထဲဝင်လာသမျှကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်တဲ့
သိပ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ပရိုဂရမ်းလေးပေါ့ ..
အဲဒီ Gtalk လိုပဲ .. Desktop ပေါ်ကနေ Browser ဖွင့်စရာမလိုပဲ
Facebook က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chatting ထိုင်လို့လည်းရသလို
Newfeed တက်လာတိုင်းလည်း ချင်ချင်းသိရှိနိုင်မယ့် ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုကို
တော်တော်လေး အသုံးပြုသင့်တဲ့အပြင် ကွန်နက်ရှင်ကျနေတဲ့အချိန်မှာတောင်
Run နေနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်လေးဖြစ်လို့ မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အဲဒီလိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ..
တစ်မျိုးက Digsby ဖြစ်ပြီး
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Chit Chat ဖြစ်ပါတယ် ..
အဲဒီနှစ်မျိုးမှာ Digsby က သုံးရတာ အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ် ..
Chit Chat ကတော့ CPU စားတာလည်း မနှစ်သက်စရာ ကောင်းတဲ့အပြင်
Not Responding လည်း ခဏခဏ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ် ..
(ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်နက်ရှင်တော်တော်ကျနေချိန်မှာ စမ်းကြည့်လို့လား
လို့လည်း သံသယရှိပါသေးတယ် .. စမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ သုံးကြည့်ပေါ့
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြီး Comment မှာ Comfirm
လုပ်ကူကြပါဦး .. Chit Chat က ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ User စစ်တမ်းတွေမှာ
ဖတ်ထားရလို့ ကျွန်တော်လည်း သုံးချင်လို့ပါ .. )
ကဲ .. Digsby ကို အသုံးပြုနည်းလေး ပြောပြပါမယ်
လောလောဆည် Digsby ကို သူ့ရဲ့ Page ဖြစ်တဲ့ ဒီမှာ သွားပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ ..
ပေးထားတဲ့လင့်ကိုနှိပ်လို့ Page ကိုရောက်ပေမယ့် တရုတ်စာလိုမျိုးတွေပဲ ပွင့်လာတယ်ဆိုရင် ( ကွန်ကျချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်.. ) အဲဒီလင့်ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ထဲက Open link in new window ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်
ဒေါင်းပြီးလို့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် အောက်ကပုံလေးတက်လာပါမယ် ..
Digsby အကောင့်ရှိမှ သူ့ကိုသုံးလို့ရမှာမို့ Digsby အကောင့်ဖောက်ဖို့
အောက်ဆုံးက Don't have an account ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. အောက်ကပုံအတိုင်းတက်လာပါမယ်
Digsby username နေရာမှာ ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့နံမည်ကို Spacebar မခြားပဲ
Your Email Address နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Email လိပ်စာအမှန်ကို ထည့်ပါ..
Password နှစ်ခုကို တူအောင်ထည့် ..
I have read .... ရဲ့ရှေ့မှာ အမှတ်လေး ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် .. အောက်နားက Register ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ခဏနေရင် ကိုယ့်ရဲ့ Digsby Username ရသွားကြောင်း Box လေးတက်လာပါမယ် .. အဲဒီထဲက ကိုယ့်ရဲ့ User name ကိုလည်း မှတ်ထားပါဦး ကိုယ်က ရှေ့ဆုံးစာလုံးကို စာလုံးအကြီးနဲ့ ရေးပေးလိုက်ပေမယ့် သူက စာလုံးအသေးနဲ့ပေးလာတတ်လို့ ကိုယ့်အကောင့်မှာ သုံးတဲ့အခါ သူပေးတဲ့ User name ကိုပဲ သုံးရမှာပါ .. အကောင့်ရသွားကြောင်း တက်လာတဲ့ Box ကို ပိတ်လိုက်ပါ ..
အဲဒီအခါ Install လုပ်ပြီးပြီးချင်းတက်လာတဲ့ Box လေးကျန်ပါမယ် ..
အဲဒီထဲက Digsby Username မှာ Digsby က ပေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နံမည်ကို ထည့်ပါ .. Password နေရာမှာ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Password ကိုထည့် ... အောက်က save password နဲ့ auto login မှာ အမှတ်တပ်သင့် မတတ်သင့်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ဆုံးဖြတ်ပါ ..
၀င်းဒိုးတက်တာနဲ့ Digsby က ပွင့်လာမယ် .. save password မှာအမှတ်တပ်ထားရင် Digsby အကောင့်ကို password ပြန်ထည့်စရာမလိုပဲ Sign In ကို နှိပ်လိုက်ရုံပဲ
Auto login ကိုပါ အမှတ်တပ်ပေးထားရင် Sign In ကို နှိပ်စရာမလိုပဲ .. အလိုလို log in လုပ်သွားမယ် ..
ကဲ ... Sign In ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်းတက်လာမယ် ..
အဲဒီထဲမှာ အပေါ်ဘားတန်းပေါ်က ဟာတွေက ဒီအကောင့်တစ်ခုတည်းမှာပဲ သုံးလို့ရတဲ့ Social Media တွေကို ပြထားတာပါ .. ( အများကြီးနော် .. လန်းတယ် )
ကဲ .. Facebook ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ .. အောက်ကပုံအတိုင်း တက်လာမယ် ..
အဲဒီထဲက အကွက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook သုံးတဲ့ နံမည်ရေးလို့လည်းရတယ် .. လိပ်စာရေးလို့လည်းရတယ် .. အောက်က နေရာတွေကတော့ Facebook ရဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍတွေကို သုံးမယ်ဆိုတာကို မှတ်ပေးရတာပါ ..
ရွေးချယ်ပေးပြီး Save ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
နောက်ထပ်လာတဲ့အဆင့်တွေကတော့ .. Facebook ကို Log In ၀င်နေသလိုမျိုးတွေပဲ ..
User name or email address ဖြည့်စရာတွေ Password ဖြည့်စရာတွေ တက်လာမယ် ..
ဒီအကောင့်နဲ့ Facebook ကို သုံးခွင့်ပြုမပြုမေးမယ် .. အဲဒီနေရာမှာ Allow နှိပ်ပေးရမယ် ..
ပြီးသွားရင်တော့ .. သူ့အလိုလို ချိတ်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ် ..
ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Desktop ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းက ဒေါင်လိုပွင့်နေတဲ့ ထဲမှာ Online ဖြစ်နေသူတွေ Offline ဖြစ်နေသူတွေကို မြင်ရမယ် ..
New Feeds တက်လာတိုင်း Notification တွေ တက်လာမယ်
Online ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်နဲ့ Chat ချင်ရင် အဲဒီသူငယ်ချင်းပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲက ဘယ်ဖက်အပေါ်ဆုံးဒေါင့်မှာ ရှိတဲ့ ခဲတံပုံလေးနဲ့ IM ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် Chat Box လေးပွင့်လာမယ် ..
စာလုံး Font ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font နဲ့ ပြောင်းပြီး အသုံးပြုလိုက်ရုံပဲ ..
Emotion Sign တွေလည်း တော်တော်လန်းတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ် ..
မျက်စိရှုပ်လို့ ဘယ်ဖက်က ဒေါင်လိုက် Digsby List ကို ပိတ်ထားလိုက်ရင်လည်း ရတယ် ..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်က Message ပို့လာရင် Chat Box လေး ပွင့်လာမှာပဲ ..
အဲဒီဒေါင်လိုက် List ကို ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် .. အောက်နားလေးက အလံရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ Tray Icons တွေရှိနေတဲ့ အပေါ်မြှားဖြူဖြူလေးကိုနှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ထဲက Digsby ရဲ့ အိုင်ကွန်လေးပေါ်မှာ
Right Click နှိပ် .. ပွင့်လာတဲ့ထဲက Show Buddy List ကို နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြန်တက်လာလိမ့်မယ် ..
ကဲ .. Digsby နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးတွေကတော့ အများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့သုံးကြည့်နေရင်နဲ့ သိလာပါလိမ့်မယ် ..
နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chit Chat ကတော့ .. ကျွန်တော်လည်း စမ်းသုံးကြည့်လို့ အဆင်မပြေသေးတာကြောင့် ထည့်မရေးတော့ပါဘူး .. စမ်းသုံးကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့
Chit Chat ရဲ့ မူရင် Page ဖြစ်တဲ့ ဒီမှာ သွားပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
(သုံးကြည့်ပြီးရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပြဦးဗျ .. )
ကဲ .. Facebook ကို Digsby လေးသုံးပြီး လန်းလိုက်ကြပါဦး ..
Posted by chityin htoo at 20:13
ပြောရင်းဆိုရင်း – Moe Z
MS word မှာ သင်္ကေတများ ရေးနည်း
သင့် Windows လေးမှာ Error တွေပရဗွနဲ့ ရောဂါတွေရနေပြ...
Flash Song လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ Swish Max4Portable ...
Software ကို Full version ဖြစ်အောင် Patch အသုံးပြု...
2013 မှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရထားတဲ့ ☆ Corel® PaintShop Pro...
BitDefender 2013 full version
2013 AVG Antivirus + 2018 ထိသုံးရမယ့် Keys
Root လုပ်ပြီးသား Android များကို မြန်မာစာ သွင်းနည်...
VIBER မြန်မာဗားရှင်း ထွက်ပါပြီ ( for iphone)
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလည်း Youtube ဗီဒီယို ဖြောင့်ဖြေ...
Android ဖုန်းလေးကို Sidebar ထည့်မယ်
ကွန်ပျူတာ မြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ | အထွေထွေ....
American music Awards (2013) [Album]
ရဲလေး – Collection [5 Albums]
Wanted – Collection
MM Own Tune – ပဂေး [Album]
VA – မင်းနဲ့အတူ [Album]
သဇင်သင်း – ငါ့လောက်ချစ်သူ [Album]
VA – ဆုံမှတ်များရဲ့ ရင်ခုန်သံ [Album]
Cyberlink Power Director ဖြင့် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်း...
ပျောက်သွားတာ၊ မှားဖျက်တာတွေ ပြန်ရှာဖို့ အတွက် Data...
ကိုးရီးယား ဘာသာစကား သင်ယူလိုသူများအတွက် စကားပြောစာ...
အလုပ်ပါးအလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်သူအတွက် Gtalk Auto ...
ကွန်ပျူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်စေဖို့ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့...
photoshop ၀ါသနာရှင်များအတွက် Artizem photo editor ...
Computer မှာ Adware, hiJack, Viruses တွေနဲ့ Browse...
Internet Download Manager 6.15 Build2(No Need Cr...
စိမ့်နေခြည် – ချစ်တဲ့ချာတိတ် [Album]
Football Manager Handheld 2013 v4.1 for Android
Window Linux, Ubuntu တို့ ကို လေ့လာသူတွေအတွက် အသုံ...
Next Launcher လေး လန်းချင်သူများအတွက်
control voice for S3 4.1.2
Love at4Size Eng Sub Part1,2,3 end (movie)
iPhone ကို 3D Effect ထည့်ပြီးအလှဆင်ရအောင်
ပန်းအိဖြူ – ချစ်သူအလွမ်းတေး [Album]
Mobile ဖုန်းမှတဆင့် phone number မပေါ်အောင် ခေါ်နည်း...
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (၂၀၁၃)-ခုနှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ဟေ...
Password ပေးထားတဲ့ Computer ကို Password မသိလဲ ၀င်...
CD/DVD Drive ပျောက်နေလျှင် ဖြေရှင်းနည်းပေါင်းစုံလေ...
စက်ရဲ့ Connection Speed နဲ့ IP ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ ?...
Talking Math For Pc 4MB
Wood Camera v2.0 for iPhone/Pad/Pod touch
New Jailbreaker များအတွက် cydia တွင် Sources သွင်း...
Laptop ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်ချင်သူများအတွက်
Samsune Glaxy Tab2ကို Root လုပ်နည်း
ဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက် ကြည့် နိုင် မည့် Android app...
မြန်မာ Flash သီချင်းများအပိုင်း(၁)
WiFi Mouse Pro v1.3.2 Apk
Window 8ကို Carck နဲ့ Patch မပါဘဲ Activate လုပ်မယ...
ဆူးဆူးဇော်ဝင်း – တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတိုင်း
မေဖြူဖြူ – အချစ်ပန်းချီ
နှင်းအဉ္ဇလီ – ယောက်ျားစကား ….. ပြော
ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရ - အခြမ်းတစ်စုံ
အိတ်ဆောင် ပိဋကတ်သုံးပုံစာအုပ် APK for android
Gold Valentine [Shwe FM ] – VA
Windows 8 မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတော်တော်များများရဲ့ တရ...
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Ner...
Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စကြ၀ဠာကြီးတစ်ခုလုံး သ...
နေဇော် – ငပွေး [Album]
ဘကြီးဖြိုးနဲ့ ဦးနေဝင်း-Snare (CD )
အာကာသအနမ်း ( VA ) [ CD ]
Embed Code for Easy Music Radio Station
Horned Viper ခေါ် သဲမြွေပွေး
Windows XP Password ဖောက်နည်း
Advanced SystemCare Pro 6.1.9.221+Serial (Latest V...
Run အသုံးပြုနည်းနှင့် Run Command များ
ပိုးအိစံ – ဆောင်းရိပ်ညလှိုင်း [Album]
ထွဏ်းခမ် – မျက်ရည်အက်ကြောင်း [Album]